KAREN NATIONAL LEAGUE (JAPAN): 23/06/2013
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:52 AM No comments:
Obama met Mandela in 2005, when he wasaUS senator
A picture of Barack Obama is among the many goodwill messages left for Nelson Mandela outside the hospital where he is being treated
The hospital in Pretoria where Nelson Mandela remains inacritical condition has becomeaplace of pilgrimage for his many supporters.
The walls and railings of the hospital are covered with images of the first black South African president and icon of the anti-apartheid struggle.
Many people have been bringing messages of thanks for his achievements, and expressions of hope for his recovery.
Well-wishers have been singing and dancing as well as praying for the 94-year-old.
Sadness at his failing health is mixed withasense of national pride foraman many consider to be the father of the nation, say correspondents outside the hospital.
The ruling African National Congress says it will hold vigils every night Mr Mandela is in hospital.
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 10:44 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 3:23 PM No comments:
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဗဟန်းမြို့နယ် ဆရာစံ(အရှေ့မြောက်)ရပ်ကွက်၊ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ဓမ္မာရုံမှတ်တိုင် အနီးရှိ ငါးထပ်တိုက် လေးလွှာ တိုက်ခန်းရှေ့ ဝရန်တာမှ အသက် ၃၆ နှစ် အရွယ်ရှိ ပန်းချီဆရာတစ်ဦး ခုန်ချ သေဆုံးခဲ့မှု ဇွန်လ ၂၃ ရက် ညနေ ၄နာရီ မိနစ် ၃၀ ခန့်က ဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း မျက်မြင် တွေ့ရှိသူ အချို့က The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ခုန်ချ သေဆုံးသူမှာ ပန်းချီဆရာ စောခူကြီး ဆိုသူဖြစ်ပြီး အမှတ် ၁၆၀ ဦးချစ်မောင်လမ်း၊ ငါးထပ်တိုက် လေးလွှာ ညာဘက် အခန်းတွင် နေထိုင်သူ ဖြစ်ကြောင်း၊ မခုန်ချမီ မိနစ်ပိုင်းအလိုက တိုက်ခန်းအတွင်း လမ်းလျှောက်နေပြီး ၎င်း၏ဇနီးက အဝတ်လျှော်စက် ပိတ်ရန် တိုက်ခန်း အနောက်ဘက်သို့ သွားရောက်နေစဉ် ပန်းချီဆရာက အရှေ့ ဝရန်တာ တံခါးကို ဖွင့်ကာ ခုန်ချခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သေဆုံးသူ၏ဇနီး ပြောကြားချက်ကို ကိုးကား၍ စစ်ဆေးသည့် ရဲအရာရှိ တစ်ဦးက ပြောကြားသည်။
အရက် ဖြတ်ထားသည်မှာ မကြာသေး၍ ဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်နေသူ ၎င်းကို ဇနီးသည်က ဂရုတစိုက် ကြည့်နေသော်လည်း အဝတ်လျှော်စက် ပိတ်ချိန် တစ်ခဏ အတွင်းမှာပင် ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ တိုက်အနီးတွင် မုန့်မျိုးစုံ ဖွင့်လှစ် ရောင်းချသူ ဒေါ်သင်းသင်းဦးက ရှင်းပြသည်။
“သူပြုတ်ကျတဲ့ နေရာမှာ ကားတစ်စီးက ကွယ်နေတော့ ကားပေါ်ကပဲ ပြုတ်ကျတယ် ထင်နေတာ၊ ဘေးက အကြော်သည် အဒေါ်ကြီး အော်တော့မှ တိုက်ပေါ်က ပြုတ်ကျတာမှန်း သိတာ” ဟု မျက်မြင် တွေ့ရှိသူ ဦးခင်မောင်မြင့်က ပြောကြားသည်။
ခုန်ချခဲ့သူသည် ပလက်ဖောင်းကို မေးတင်ကာ ပြုတ်ကျခဲ့ပြီး လာရောက် ကူညီခဲ့သူကို မပီမသ စကားများ ပြန်လည် ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ၁၅ မိနစ် အကြာတွင် ငြိမ်ကျသွားရာ အငှားယာဉ်ဖြင့် ရန်ကုန်ဆေးရုံကြီးသို့ တင်ပို့စဉ် လမ်းခုလတ်တွင် သေဆုံးခဲ့ကြောင်း ကိုယ်တိုင်ပွေ့ထူကာ ကူညီခဲ့သူ ဦးခင်မောင်မြင့်က ရှင်းပြသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ ဗဟန်းမြို့နယ် ရဲစခန်းသို့ တယ်လီဖုန်းဖြင့် မေးမြန်းခဲ့ရာ တိုင်းဒေသကြီး ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးကို မေးမြန်းပါရန် ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြန်လည်ဖြေကြားသည်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:44 AM No comments:
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:51 AM No comments:
အစွန်းရောက် အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ ခေါင်းထောင်ထလာရင် မြန်မာပြည် ယူဂိုဆလားဗီးယားလိုဖြစ်နိုင်ဟု သတိပေး (ရုပ်သံ)
အစွန်းရောက်အမျိုးသားရေးဝါဒီတွေ ခေါင်းထောင်ထလာရင် မြန်မာပြည် အသွင်ကူးပြောင်းရေးဟာ ဒီမိုကရေစီ ဆုံးရှုံးသွားပြီး ယူဂိုဆလားဗီးယားလို ပျက်စီးသွားမယ်လို့ ချက်သမ္မတနိုင်ငံက ပညာရှင်တစ်ဦးက ဇွန်လ ၂၂ရက်နေ့မှာ သတိပေးလိုက်ပါတယ်။
Posted by ကရင်အမျိုးသားအဖွဲ့ ချုပ် ( ဂျပန် ) at 12:47 AM No comments: